1547-1583 को समयमा रूस को इतिहास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी वर्ष (शासन Ivana Groznogo) सामान्य सार्वजनिक, विशेष गरी कुख्यात oprichnina सम्बन्धित। र त्यो साँच्चै मास्को को अगाडी, राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक विकास मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव थियो स्थिति। तथापि, अन्य महत्वपूर्ण यी वर्ष देखा पर्यो गरेको मात्रा रूपान्तरणहरू टिप्पणीमा। Rada चुन्नु गर्न - इवान डरलाग्दो शासन आफ्नो समय एक प्रकारको को सरकार द्वारा शुरू विविध सुधार सँगसँगै थियो। मूलतः, सबै परिवर्तनहरू वास्तवमा, साधारण सार्वजनिक अर्डर र देश भर संरचना मा, राज्य र थप सिर्जना centralizing उद्देश्य थिए। यो अर्थमा, विशेष यी वर्ष केही भन्दा कुनै फरक। Ivana Groznogo शासनकालको साथै प्रारम्भिक उच्च मध्य युग रूपमा थाले जो निरपेक्ष राजतन्त्र प्रति पान युरोपेली प्रवृत्ति, भित्र छ। यहाँ हामी जो शायद चाहनुभएको इवान ग्रोजनी अर्को कारण, उल्लेख गर्नुपर्छ। आफ्नो बाबु र पूर्ववर्ती, Vasily III को शासनकालमा ठूलो मात्रा लोकप्रिय विद्रोह गरेर चिन्ह लगाइयो। र 1547 मा भीड पनि शाही परिवार को एक प्रतिनिधि मार्न, dared को boyars को arbitrariness outraged। यो राज्य सुधार आवश्यक छ कि स्पष्ट थियो। सबै को पहिलो, न्यायिक र प्रशासनिक।
सुधार गतिविधि खुसी चुनिएको
राजा संग अनौपचारिक सरकार एक प्रकारको 1547 देखि 1560 को संचालित जो आफ्नो लक्ष्य को बोध लागि सिर्जना गरिएको छ। सबै सुधार, Muscovy मा एक गुणात्मक bureaucratic राज्य प्रणाली वास्तवमा गठन देश मा स्थिति, बिजुली को centralization, feudal कलह को vestiges को उन्मूलन, र यति मा नियन्त्रणमा लिएर उद्देश्य थिए। को अनौपचारिक सरकारको संरचना आचरण केही, यो boyars, आध्यात्मिक नेताहरूले समावेश। मुख्य परिवर्तन निम्न थिए:
न्यायिक सुधार। Boyarsky अदालत अब आफूलाई boyars न्याय गर्न सक्छ, यो ठीक राजा को अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। व्यवस्थाको नयाँ कोड, Rada विकास, feudal प्रभुहरूका न्यायिक विशेषाधिकार को एक नम्बर सफाया र केन्द्रीय जहाजहरु को मूल्य उठायो। पहिलो पटक व्यवस्था को मुख्य र केवल स्रोत व्यवस्था घोषणा भएको थियो। त्यो चलनअनुसारको अधिकार, Indulge boyar arbitrariness liquidated छ।
Zemstvo सुधार नगरपालिका विभाग वा Township समुदाय आत्म-व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण: कर सङ्कलन र आफ्नो आदेश कायम राख्ने। यसबाहेक, खेती समुदाय बराबर अधिकार शहर संग पहिचान गरिएको छ। अब सबै उनको विकल्प - गाउँमा headmen, Dvorsky - राज्य को कर्मचारीहरु छलफल।
रक्षा सुधार - सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, शासन Ivana Groznogo समयमा अवलोकन थियो। यसलाई अनिवार्य सेवा आचरण को सिद्धान्त घोषणा गरे। 1550 मा यो सिर्जना गरिएको थियो , strelets सेना रूसी मुलुकका पहिलो पटक। महत्त्वपूर्ण शत्रुता समयमा मा governorship abolishing व्यवस्था थियो।
तथापि, को, को boyars काम भए तापनि तिनीहरूले चाँडै तीतो वर्ष आए लागि, centralizing राज्य उद्देश्य। इवान आफ्नो अन्तिम अवधिमा भयानक को शासन को अभिजात वर्ग विरुद्ध कुल आतंक द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। राजा सुधार सरकार सदस्यहरू जानाजानी आफ्नो शक्ति को एक निरपेक्ष delaying कि, धेरै ढिलो हुन् भनेर लाग्यो। प्रारम्भिक 1960 मा, राजा काँध गर्न चाहे निर्णय गर्छ। यो एक धेरै docile शरीर लडाई guardsmen बस शारीरिक को आचरण को प्रतिनिधिहरु नष्ट गर्न सुरु गर्ने सिर्जना गर्छ।
रूसी दीर्घकालीन उड्डयन र यसको इतिहास
Aleksey Lihnitsky - अभिनेता र हास्य अभिनेता
Stalinist दमन को भूल नाम: Vasily Kotov
सभ्यता के हो? सुविधाहरू, सुविधाहरू, सभ्यता विकास। रूसी सभ्यता, पश्चिमी, पूर्वी, आधुनिक इतिहास। विश्व सभ्यताहरू
ग्रीक पोत: फारम र समारोह
कसरी छिटो र सजिलै एङ्कर आकर्षित गर्न
"स्कोडा यती" - नयाँ चेक क्रसओभर को मालिक को समीक्षा
माछा मार्ने: आक्षेप लागि केही चारा सबै भन्दा राम्रो छ?
अमीनो एसिड के हुन्
धार्मिक छुट्टी Macovei: परम्परा। Macovei के खाना पकाउने गर्नुपर्छ?
मार्को Rubio - अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेदवार। जीवनी, राजनीतिक क्यारियर